Ogaden News Agency (ONA) – Ururka midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadeniya ee South Africa oo Xusay maalinta Xasuuqa shacabka Ogadeniya Port Elizabeth ( P E)
Ururka midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadeniya ee South Africa oo Xusay maalinta Xasuuqa shacabka Ogadeniya Port Elizabeth ( P E)
Posted by ONA Admin	/ February 21, 2012
Ururka OYSU faraciisa Eastern Cape ayaa isugu yimid Xuska maalinta xasuuqa shacabka Ogadeniya oo daafaha Dunida siweyn loogu qabtay. Munaasabadaas oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa soo agaasimay Ururka midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadeniya & jaaliyada Ogadeniya waxaana si weyn uga soo qayb galay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida Ogadeniya oo ay munaasabadani xasuus-qiiro xambaarsan ay uleedahay.
Waxaa madasha munaasabada lagu qabtay soo buux dhaafiyay dad ay wajiyadooda ka muuqato qiirro halgan & murugo wadaniyadeed. Waxaana laga dareemayay shu cuurtooda murugo xasuusi ku dheehantahay
Munaasabadan oo aad xasaasi u ahayd waxaa furay Hogaanka Arimaha Bulshada Ururka OYSU ee faracaas mudane Bashiir Shiekh Axmed oo dadweynihii munaasabada ka soo qayb galay siweyn u soo dhaweeyay una mahad ciliyay dadweynaha u yimid xuska maalinta furitaanka.
Hogaanka kadib waxaa microfonka lagu soo dhaweeyay Halgame Shiekh Maxamed Raabi oo aayado Qur’aan ah & wacdi diini ah ka soo jiidiyay munaasabada. Shiekha wacdigiisa ayaa u badna in la xasuusnaado Halyeeyadii u shihiiday qadiyada soomaalida Ogadeniya. Wax yar kadib waxaa madasha warbixin ku saab san xasuuqa shacabka Ogadeniya sida ay ciidamada Tigreegu ugumaadayaan dadka shacabka ah een waxba galabsanin ka soo jeediyay:
Halgame Abdiraxmaan Siciid waxaa kalee oo uu kudheeraaday sababta loo aqoonsaday maalinta xasuuqa shacabka ogaadenia iyo waxyaabihii dhacay bishan February kuwii ugu wawaynaa iyo waliba taarikh dheer.
Gudoomiyaha jaaliyada ogadeniya Halgame Suldaan Cabdi Askar (Casaanyo) ayaa isna ka hadlay Madasha. Gudomiyaha ayaa kudheeraaday arimaha abaabulka waxaana kamid ahaa hadaladisii “hadaad rabtaan wax qaali ah waxaa lahuraa wax qaali ah ”
Hogaanka Arimaha bulshada mudane Xassen Cabdi (qubi) & masuuliyiin ka tirsan Ururka OYSU & dadweyne kasoo qeybgalay xuskan ayaa iyana hadalo qiiro xanbaarsan kasoo jeediyay halkaas. Waxayna dhamaan dadkii munaasabada isugu yimid ku dardaarmeen in ay marwalba diyaar u ahaadaan garab istaagaana- u hiiliyaana shacabka walaalahood ah ee xasuuqa & gabood falada loo gaysanayo ee Soomaalida Ogadeniya.
waxaa ay dadkii meesha isugu yimid Canbaarayn dusha uga tuureen gumaysiga Ethiopia ee xasuuqa kagaysta Ogadenya: kii hada ugu danbeyay ee Guna gado sidoo kale waxay tacsi hawada umariyeen shacabka dhibaatadu kudhacday.
munaasabadan oo lagu xusayay maalinta xasuuqa shacabka Ogadeniya oo ay dad badani kahadleen waxaa la keydgareeyay oo aad looga hadlay Xasuuqa, boobka, baro kicinta, xidh-xidhka, kufsiga & waxyeeleenta shacabka Ogadeniya ay kula dhaqmaan Ciidamada Tigreegu.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka South Afrika ayaa Bishan dacwad ka furtay maxkamada ICC iyaga oo u maraya wadanka South Afrika.
Eastern Cape Port Elizabeth (P E)
halgame hanad says:
Hawaado, hawaado ,halyayadii lalaayay,hooyadii lagawracay,hablihii lagarab raray,iyo hormuudkiyo duqaydii ,gumaysigu horay u cunay waan u hiilin oo waan hanan xornimadoo ,waxii aan haraad maray waan hilmaami doonaam. Guulaysta halgamayaal